Accueil > Gazetin'ny nosy > Pierrot Rajaonarivelo: “Mpitondra fanjakana tsy niomana”
Pierrot Rajaonarivelo: “Mpitondra fanjakana tsy niomana”
Nivoaka tao anatin’ny fahanginany i Pierrot Rajaonarivelo ny alahady atoandro teo, raha nasain’ny onjam-peo Aceem Radio tao amin’ny fandaharana iandraiketan’ny Namana Penjy Randrianarisoa. Ny toe-draharaham-pirenena ankapobeny no nitondrany fanazavana tao araka ny fanontaniana nanitikitika ny mpanao gazety tao sy ny mpihaino.
Tamin’ny ankapobeny aloha dia hita soritra ny maha-mpanao pôlitika matihanina an’ity filoha nasionalin’ny antoko “Mdm” ity. Nambarany mantsy fa “tsy azo atao ny manao zinona ny lasa raha te hibanjina ny ho avy na te hijery ny ankehitriny”. Dia nanao jery todika ny raharaham-pirenena teto tato anatin’ny 40 taona eo izy. Ireo anton’ny safidy isan-karazany nanoritan’ny mpitondra fanjakana ny pôlitikam-pirenena nitantanana ny tany sy ny fanjakana dia nitondrany famelabelarana. Teo, ohatra, hoy i Pierrot Rajaonarivelo ny nisafidianana ny sori-dalana sosialisma tamin’ny Repoblika faharoa, sy ny tetik’asa isan-tokony notanterahina tao anatin’izany, toa ilay fampiasam-bola mihoa-pampana (investissement à outrance). Teo ny nahavoatery nifampiresaka tamin’ny andrim-bolan’i Betton Woods, dia ny Banky Mondialy sy ny Fmi. Nirazotra tamin’izany ny nandrafetana an’ireo antontan-taratasy isan-karazany nampifanandrifiana tamin’ireo fepetra napetraka ny mpampindram-bola iraisam-pirenena.
Fa isan’ny nomarihiny koa ny toerana notanan’ny “Mdm” hatramin’ny nijoroany. Isan’ireny ny nilazan’ity filoha nasionalin’ny “Mdm” ity fa “tamin’ny vanim-potoana tetezamita dia nanana olona tao anatin’ny andrim-panjakana tetezamita ny Mdm, na tao anatin’ny Governemanta na tao anatin’ny Filankevitra ambonin’ny tetezamita na tao anatin’ny Kaongresin’ny Tetezamita”. Tsy nihodinkodina mihitsy izy nilaza fa “tsy menatra ny manambara izahay fa isan’ny tompon’andraikitra tao anatin’iny rafitra tetezamita iny, ary iantsorohanay 100 % ny zava-nisy sy ny akon’ny natao tamin’izany”.
Nomarihiny koa anefa ny maha-zava-dehibe hatrany ny fanajana sy ny fandalana ny soatoavina demokratika sy ny sata Repoblikana ijoroan’ny firenena Malagasy amin’izao fotoana.
Ny amin’izao fotoana dia notsindriany fa “Mdm ny antoko tarihiny ary miara-miasa amin’ny fitondrana ny Mdm fa tsy Hvm velively”. Mbola tsy nandray fanapahan-kevitra momba ny ho fandraisana anjara sy ny ho fanolorana olona hofidiana filohampirenena na tsia ny Mdm, hoy izy.
Isan’ny nomarihiny koa fa “matoa mbola tsy tena ahitana fivainganany ny asan’ny fitondrana ankehitriny dia azo atao ny milaza fa noho ny tsy fahampian’ny fiofanana sy ny fiomanana hitantana raharaham-pirenena”.
Fa isan’ny fanontaniana niantefa tamin’i Pierrot Rajaonarivelo koa tamin’io alahady io ny momba azy sy i Marc Ravalomanana. “Tsy dia tiako loatra”, hoy izy, “ny hamoha fota-mandry, fa ny azoko ambara dia Ingahy Ravalomanana Marc ihany no efa nanambara imasom-bahoaka fa resaka pôlitika no nanenjehana ny tenako Pierrot Rajaonarivelo, ka tao anatin’izany ny namoronana an’ireny raharaha nanenjehana ny tenanay tamin’ny fomba maro ka nitohy tamin’ny fisavana ny trano sy ny fanakanana tsy ho afaka nody an-tanindrazana, ary ny fanenjehana teny amin’ny fitsarana”. “Mazava angamba ny amin’iny”, hoy ity loholon’i Madagasikara ankehitriny ity.